Myanmar New & Used Cars, Car Dealers and Dealerships - မြန်မာသစ်အသုံးပြုကြသည်ကားများကကားကုန်သည်တွေနှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် - All Global Car Brands and Their Presence Worldwide! - Automobile Dealers, Auto Manufacturers
Home/Asia/Myanmar New & Used Cars, Car Dealers and Dealerships – မြန်မာသစ်အသုံးပြုကြသည်ကားများကကားကုန်သည်တွေနှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်
Myanmar New & Used Cars, Car Dealers and Dealerships – မြန်မာသစ်အသုံးပြုကြသည်ကားများကကားကုန်သည်တွေနှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်teodorv2019-06-21T20:05:34+00:00
Myanmar (Burma) | မြန်မာ
[EN] Below you can find information on all new and used cars offered in Myanmar / Burma by dealerships, car dealers, private sellers and car auctions.
Country information | တိုင်းပြည်သတင်းအချက်အလက်များ: Myanmar / Burma
Myanmar vehicle registration plates information | မြန်မာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ကြေးပြားသတင်းအချက်အလက်များ
Population | ပြည်သူ့အင်အား: 53,582,855 – (2017)
Total Registered Motor Vehicles | စုစုပေါင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်: 363,000 – (2010)
New car sales | ကားအသစ်ရောင်းအား: 3,344 – (estimate 2017)
NEW CARS IN MYANMAR (BURMA)
Suzuki [Myanmar Suzuki Motor Co Ltd;
Address: Block 23/Plot476(C), Mogoke St, Industrial Zone, South Dagon, Yangon;
USED CARS IN MYANMAR (BURMA)